Decalogue yemutauri akakwana wenyaya, naHoracio Quiroga | Zvazvino Zvinyorwa
Horacio Quiroga, aive a Uruguayan mutambi wemitambo uye mudetembi zita rake chairo rainzi Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Akazvarwa muna 1878 uye akafa muna 1937, kuitira kuzviuraya. Paakadzidza kuti airwara nekenza yeprostate, akatora girazi recyanide muchipatara chimwechete kwaakange achigamuchirwa.
Kunze kwekutisiyira mabasa mazhinji akanaka ekunyora, ayo atichapfupikisa pazasi, akatisiirawo mukurumbira wake «Decalogue yemunyori akakwana». Mazuva maviri apfuura, ndakagovana zvangu chirevo chemunyori akanaka; Nhasi ndinokupawo iyo decalogue yemunyori mukuru uyu zvinosuwisa kuti akatisiya nguva pfupi yapfuura. Ndinovimba unonakirwa!
Zvinyorwa zvinyorwa zvaHoracio Quiroga
"Dhayari rekufamba uchienda kuParis."
"Nyaya yerudo rwusina kujeka."
"Ngano dzerudo, kupenga uye kufa".
Kuita mukurumbira wenyaya ... (NaHoracio Quiroga)
Tenda mudzidzisi - Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov - sekuna Mwari pachake.
Iye anofunga hunyanzvi hwako isingawanikwe kumusoro. Usarote uchimuparadza. Paunenge uchikwanisa kuzviita, uchaiwana iwe usingazvizive iwe pachako.
Ramba kutevedzera nepese paunogona, asi tevedzera kana simba racho rakanyanya. Kupfuura chero chinhu chipi zvacho, kukura kwehunhu kunotora moyo murefu.
Iva nekutenda kusingaoni kwete mukukwanisa kwako kubudirira, asi mukushinga kwaunoshuva nako. Ida hunyanzvi hwako semusikana wako, uchimupa moyo wako wese.
Usatanga kunyora usingazive kubva kuzwi rekutanga kwauri kuenda. Munyaya yakabudirira, mitsara mitatu yekutanga inenge yakakosha seyechitatu yekupedzisira.
Kana iwe uchida kuratidza chaizvo mamiriro ezvinhu aya: «Kubva murwizi mhepo inotonhorera yakavhuvhuta», hapana mamwe mazwi mumutauro wevanhu pane aya anoratidzwa kuti ataure. Paunenge uchinge uri muridzi wemashoko ako, usanetseke nezvekutarisa kana ari makonsonendi kana assonant nemumwe.
Usaite zvipikisheni zvisina basa. Hazvibatsiri zvichave miswe mivara mangani yaunonamira kuzita risina kusimba. Kana iwe ukawana iyo iri yechokwadi, iye anongova chete neruvara rusingaenzanisike. Asi inofanira kuwanikwa.
Tora mavara ako neruoko uvatungamirire kusvika kumagumo, usingaone chimwe chinhu kunze kwenzira yawakavatsvakira. Usatsauswe nekuona izvo zvavanogona kana vasina hanya nazvo kuona. Usatambudze muverengi. Iyo ngano inoverengeka yakanatswa yemacheka. Tora izvi kuve chokwadi chizere, kunyangwe kana zvisiri.
Usanyora pasi pemutemo wekunzwa. Ngaafe, uye unzvenge iye gare gare. Kana iwe uchikwanisa kuzvimutsidzira sezvazvaive, iwe wasvika pahafu yepakati muhunyanzvi.
Usafunge nezve shamwari dzako kana uchinyora, kana iko kufungidzira kuchaitwa nenyaya yako. Verenga sekunge nyaya yako yanga isina chekufarira kunze kwenzvimbo diki yevatambi vako, iwe waungadai wakave mumwe. Kwete neimwe nzira unowana hupenyu hwenyaya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Decalogue yemutauri akakwana wenyaya, naHoracio Quiroga